UDkt Patrick Young bha liweyo Dianabol, Ithala .
Inkcazo yeMeta Ngaba ukhangele ukuphucula ubunzima bakho be-muscle, ukukhaba ukuqala okanye ukugcina inzuzo enkulu? I-Dianabol (methandrostenolone) ipowder kufuneka ibe yinto enkulu elandelayo. Fumana oko kufuneka ukukwazi malunga nale steroids ye-anabolic, ukusetyenziswa, ukusebenza, kunye nendlela yokudlulela kwimiphumo emibi. Isingeniso Ukuba ungumyili womzimba, [...]
I-estosterone esters inokuchazwa nje ngokuba i-moletoli ye-testosterone eneentsimbi zekhabhoni ezixhomekeke kuso. Iikhabhoni zekhabhoni zilawula ulwahlulo lwengqamaniso, ngokwemigangatho elula ukuxiliswa kweziyobisi kwigazi lakho. Ukuxiliswa kwamachiza emanzini kunqunywe ubungakanani bekhamera yekhabhoni i-ester iqulethe. Ede [...]
I-DMAA isilwanyana esinokwenziwa ngokubambisana esinceda ekwakheni umzimba, ukutshiswa kwamafutha omzimba kunye nokuphucula imemori yexesha elifutshane kunye nesenzo esifanelekileyo. Eli nqaku liquka inzuzo yeDMAA kunye nemiphumo engenzekayo ye-1,3-dimethylamylamine. Yintoni i-DMAA? Ukuqonda ukuba yiyiphi i-DMAA kufuneka ibe yenye yezinto apho naluphi na umdlali ophucula umgangatho kufuneka [...]
Ehlabathini apho i-steroids ibe yinto-nto kwaye wonke umntu owenzayo ukufezekisa iinjongo zomzimba, kukho isidingo sokuba ufunde kabanzi nge-Testosterone Cypionate. Siza kuxubusha iinkcukacha ezininzi malunga nale steroid ukusuka kwi-Testosterone dosage, indlela yokufaka i-Testosterone, indlela yokujongana nokugqithiswa kweT Testosterone, ukuhlolwa kwee-Testosterone Cypionate [...]